Abavelisi kunye nabaThengisi baseMeltblown uMachk Mask - iFektri yaseTshayina - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa nokuThengisa ngaphandle, Co, Ltd.
Ikhaya > Iimveliso > Imaski > I-Meltblown Cloth Mask
I-Meltblown Cloth Mask
Oku kulandelayo malunga neMeltblown Cloth Mask enxulumene, ndiyathemba ukuba kuya kukunceda ukuba uqonde ngcono iMeltblown Cloth Mask.
Intsholongwane ayikho yodwa, kodwa kwiindawo ezinamaconsi nakwindawo yokubola. Imaski, iimaski zerhasi, kunye nempahla ekhuselayo inesiphumo sokucoca, nto leyo iphakathiiti yangaphakathi-meltblown engekaluki.
I-Meltblown Cloth Mask isetyenziselwa ikakhulu ukucoca amasuntswana enziwe micron njengothuli, ii-microorganism kunye ne-haze. Ukusasazeka okungaqhelekanga kweproducypylene ye-ultrafine fibers kunamathela kunye, kwaye inkangeleko imhlophe, ithambile, kwaye ithambile. Ubunyulu befibre yezinto ezibonakalayo bubuninzi be-0.5-1.0 microns. Ukusasazwa kweefayile ngokungacwangciswanga kubonelela ngamathuba ngakumbi okuxhamla kwamafutha phakathi kweefayibha, ngaloo ndlela zisenza i-meltblown. Izinto zecebo lokucoca igesi zinendawo enkulu yomphezulu kunye nomphezulu wentlahla (â ‰ ¥ 75%). Emva konyango oluphezulu lwe-electret electrostatic, ineempawu zokuxhathisa okuphantsi, ukusebenza ngokuphezulu kunye nomthamo ophezulu wokubamba uthuli.
I-Meltblown Cloth Mask luhlobo lwendwangu engalukwanga ngombane omileyo. I-Meltblown yindlela eqhelekileyo yokuvelisa ye micron kunye nee nanofibers. Isisombululo se-polypropylene polymer sigqithiselwe kwimicu emifutshane ye-polypropylene ye-Ultra-elungile enobubanzi be-0.5-1.0 microns ngama-nozzles amancinci anesantya esiphezulu.
I-Meltblown Cloth Mask inobume obucekeceke obucekeceke bokwenyani, nto leyo enyusa inani kunye nomphezulu womphezulu weefayile kwindawo nganye yecandelo, kwaye ii-voids zilungile kakhulu. Ngonyango oluphezulu olunamandla ombane we-electrostatic, ifayibha inomthamo we-adsorption we-electrostatic, onomthamo womoya ocacileyo.
Iziphumo zokucoca umeltblown ilaphu elingelolukiweyo yi "uncumo olujijekileyo". Zombini amasuntswana amancinci kunye namasuntswana amakhulu acocwa lula. Amasuntswana angenasuntswana eoyile enobubanzi obungaphantsi kwe-0,1 micron anokuhanjiswa ngombane, kwaye isiphumo sokucoca siphezulu kwi-99%. Amasuntswana amakhulu kunee-microns ezili-10 ubukhulu anokufunxwa bubume bemilo yeentango ezidibeneyo, kwaye iimaski ezimdaka kakhulu ziyakwazi ukufikelela kumanqanaba okhuselo kufutshane ne-80%.
Eyona nto inzima kakhulu ekucoceni ziimpawu ezikwi-0,3 ye-micron ububanzi. Ke ngoko, umgangatho wokufunyanwa kwemaski e-China usebenzisa amasuntswana e-0.3 micron sodium chloride njengesalathiso sokuchonga. Iindwangu zeMeltblown ezingalukwanga ezinobunzima obungaphantsi kwe-0.1 mm zinokucoca amasuntswana e-sodium chloride e-0.3 microns ngaphezulu kwama-70%.
Intsholongwane ikhona kwi-droplet kunye ne-aerosol droplet nuclei, engama-82% yayo enobubanzi obuphakathi kwe-0.74 ukuya kwi-2.12 microns. Ke ngoko, iMeltblown Cloth Mask iba zizixhobo ezingundoqo ezinje ngemaski kunye neefilitha ze-HEPA, ezinokuthi zithintele ngokufanelekileyo iintsholongwane kwaye zidlale indima engenakuphikiswa kwicandelo lezonyango kunye nezempilo.
Iifayile ezishisayo: I-Meltblown Cloth Mask, abaVelisi, abaThengi, iiVenkile zeVenkile, iiFesi, eTshayina, ezenziwe eTshayina, amaxabiso, uLuhlu lwamaxabiso, iikowuti, I-FDA